Noorweey oo 4 malyan ku bixisay si loo cabsi geliyo tahriibayaasha soomaalida | Somaliska
Noorweey oo 4 malyan ku bixisay si loo cabsi geliyo tahriibayaasha soomaalida
Wargeyska Dagbladet iyo wargeysyo kale oo ka soo baxa dalkaasi Noorweey ayaa qoray warbixin ay kaga hadlayaan qorshey ay dowladda u degsaday tahriibayaasha soomaalida.
Qorshahan oo ay ku baxday lacag gaareeysa afar malyan oo lacagta dalkaasi ah ayaa waxaa lugu filiyey qoraalo ku qoran afka soomaaliga, codod iyo muuqaalo lugu muujinayo in dalkaasi Noorweey aaneey oolin nolol islamarkaasina looga digayo soomaalida gaar ahaan kuwa jooga dalka gudihiisa ineeysan u soo hayaamin ama u soo safrin Noorweey.
Qoraaladdan lugu cabsi gelinayo soomaalida ayaa warbixinta wargeysku sheegay in lugu qeybiyey magaalooyin ku yaala dalka Soomaaliya. Sidoo kale howshan fiinteeda ayaa waxaa gacan ka geeystay soomaali gaar ahaan muuqaaladda farshaxanka ah kuwaas oo lacag lugu siiyey. Wasaaradda caddaaladda ee dalkaasi iyo shaqsi lugu magacaabo Cabdiraxmaan Axmed ayaa si wada jir ah u sameeyey barnaamijka barobogaandada ah ee lugu cabsi gelinayey soomaalida rabtaey ineey dalkaasi magangalyo weydiistaan. Shaqsigan soomaaliga ah ayaa waxaa uu ka tirsan yahay ama ka howl galaa hey’adda qarammadda midoobey u qaabilsan muhaajirinta.
Muqaaladan ka sameeysan kartoonka ayaa waxaa ka muuqday nin soomaali ah oo ay ugu magac dareen Xasan kaas oo Noorweey tagay kal hore balse ku wareeray isagoo noloshii uu ka filaayey ka waayey dib ugu laabtay dalkiisa.
Ugu dambeyntiina wasaaradda cadaaladda dalkaasi ayaan haba yaraatee inkirin sameeynta barnaamijkaasi cabsi gelinta ah ee ka dhan ah soomaalida. Halka ninka lugu magacaabo Himanshu Gulati oo iska fogeeyey isagoo sheegay inaannu waxba kala socon barnaamijka.
Dowladda Noorweey ayaad mooda in laanteeda socdaalka ay si gaar u bartilmaameedsato soomaalida dalkaasi. Waxaana muuqa in soomaalida lafteeda ay arrimaha noocan ah ee soo laa laabta ku baraarugsaneyn saameynta ay leedahay islamarkaasina muujiya daciifnimadooda.
Mudaharaadkii ka dhacay Göteborg
Faraha & Indhaha oo laga bilaabay safaaradaha
Haween Soomaaliyeed oo maantey ku hor banaanbaxey irrida hore ee baarlamaanka Dalka Sweden